လျှာနဲ့ကွက်တိ Heart ထိတဲ့ Shwe Lar Hot Pot…… – FoodiesNavi
By yin sandi On January 10, 2018 0
ပူပူနွေးနွေး Hot Pot ? ? ဟာလူကြိုက်အများဆုံး အစားအစာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ အငွေ့တထောင်းထောင်း ဟင်းရည်ပူပူလေးထဲက ထူးထူးကဲကဲအရသာတွေ စိမ့်ဝင်နေတဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ? ? ? ၊ သား ? ? ၊ ငါး ? ? ၊ ပင်လယ်စာတွေ ? ? ?ကို စားသုံးနိုင်တာဆိုတော့ အစားတစ်လိုင်းတို့ ကြိုက်ကြတာလည်းမဆန်းပါဘူးလေ။ Hot Pot ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် လျှာနဲ့ကွက်တိဖြစ်ဖို့ကလည်း လိုသေးတယ်ဆိုတော့ Foodies Navi ကနေ Hot Pot ဆိုင်တွေထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးလို့ ပြောလို့ရတဲ့ Shwe lar Hot Pot ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်။ ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာလေးတွေကတော့-?
Hledan Shop- No.1 , Room.2 , Nar Nat Taw Street , Hledan , Kamayut.
Dagon Shop- No.25(A1) , Nawaday Street ,Dagon Township.
Thamine Shop- No.114 , Corner of Tamine Buteryone Road & Insein Road , Mayangone Township .
Sanchaung Shop- No.231 , Play Road , Shin Saw Pu Ward , Sanchaung Township.
North Dagon Shop- No.36 ward , corner of Pinion Road & Sitting Street , North Dagon Township.
Mawlamyaing(Ocean)- Thein Phone Road & Thanninthay Road Boone Ward , Mawlamyaing .
Haling That Yar(Ocean)- Ocean Super Market , Haling Thar Yar Township .
Yae Kyaw Shop- Yae Kyaw Market , Yay Kyaw Street , Pazundaung Township .
Shwe lar Hot Pot ဆိုင်မှာတော့ ရိုးရိုးဟင်းရည် ၊ အချိုအစပ်ဟင်းရည် ၊ မာလာချိုချဉ်ဟင်းရည် ၊ ကင်မ်ချီဟင်းရည် နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးဟင်းရည်ဆိုပြီး ရွေးချယ်သုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်တဲ့ Menu တွေကတော့–ပုဇွန် ၊ ဆော်လမွန်ငါး ၊ ငါးပြား ၊ ပြည်ကြီးငါး ၊ ကမာ ၊ ဂုံးယောက်မ ၊ မှိုဝက်သားလုံး ၊ ပင်လယ်ဂဏန်းနီ ၊ ဝက်သားဖက်ထုပ် ၊ ကြက်ဥဖက်ထုပ် ၊ ချိစ်ကြက်သားလုံး ၊ ကြက်သား ၊ ဝက်သား ၊ ဆိတ်သား ၊ အမဲသား ၊ ဝက်ဆားနယ်ခြောက် ၊ ကျောက်ပုဇွန် ၊ ပုဇွန်ထုပ် ၊ ဝူးလုံခေါက်ဆွဲ ၊ ပင်လယ်စာအစုံ ၊ ငါးဖယ်ပြား ၊ ငါးလုံးအစုံ ၊ ထိုင်ဝမ်ဝက်သားနယ်ထမင်း ၊ အပ်မှို ၊ မှိုလုံး ၊ ပိန်းဥ ၊ ကြက်ဥ ၊ ပဲပြားခြောက် ၊ မုန်ညင်းဖြူ ၊ ဆလပ်ရွက် ၊ ပန်းပွင့်စိမ်း/ဖြူ ၊ ပြောင်းဖူး ၊ ရွှေဖရုံ ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ဂျပန်ပဲပြား ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ကန်စွန်းရွက် ၊ ကြာစွယ် စတဲ့စုံလင်များပြားတဲ့ Menu တွေကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရသာကလည်း လုံးဝထူးခြားသလို ? ? အသားငါးပင်လယ်စာနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကလည်း တအားလတ်ဆတ်တာကြောင့် တစ်ခါသွားစားကြည့်ရုံနဲ့တစ်သက်မမေ့နိုင်ဖြစ်သွားစေမှာပါ။ ? ? ဆိုင်ကလည်းသပ်ရပ်သန့်ရှင်းနေတာကြောင့် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စိတ်ချယုံကြည်စွာစားသုံးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ပဲသွားသွား ?‍?‍?‍? ၊ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲသွားသွား ၊ ချစ်သူနဲ့ပဲသွားသွား အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ခွဲတွေလည်းအများကြီးရှိတာကြောင့် ကိုယ်နဲ့နီးတဲ့ဆိုင်ကိုရွေးချယ်ပြီး လတ်ဆတ်ထူးကဲတဲ့အရသာ မြည်းစမ်းခံစားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်။?‍♂️ ?‍♀️
Image Source : www.facebook.com/shwelarhotpotofficial